သွယ်လျကျန်းမာ သွက်လက်စေဖို့ မျှတစွာစားသုံးပါ . . . – Healthy Life Journal
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် တစ်ဂရမ်စားတိုင်း ကယ်လိုရီ လေးယူနစ်ရပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ၂၀၀၀ လိုပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ သူတွေဆို တစ်နေ့ကို ၁၃၀၀ လောက်ပဲ လိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့သူတွေ ဥပမာ- ကုန်ထမ်းတဲ့ ယောက်ျားကြီးတွေဆို တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ ၃၀၀၀ လောက်အထိ လိုပါတယ်။ ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆို တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ ၁၆၀၀-၂၀၀၀ လောက်ပဲ လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က တစ်နေ့ကို ၂၀၀၀ ယူနစ် စားတယ်ဆိုပါတော့။ သုံးလိုက်တာက ၁၆၀၀ ဆိုရင် ၄၀၀၊ ၅၀၀ လောက်က ပိုနေပါတယ်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါ ပိုနေတဲ့ ကယ်လိုရီ ၃၀၀၀ ဖြစ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ပေါင်တက်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ၃၀၀၀ လျော့နည်းတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ပေါင်ကျပါတယ်။ ဒီတော့ ၀ချင်တဲ့သူတွေ တစ်ရက်ကို ကယ်လိုရီတစ်ရာ တိုးစားရင် တစ်လပြည့်ရင် တစ်ပေါင်တက်မှာပါ။ အဲလိုပဲ ပိန်ချင်တယ်ဆိုရင် ကယ်လိုရီကို တစ်နေ့ ၅၀၀ လောက် လျှော့စားပေးပါ။ အစားအသောက်ကို ၂၅၀ ကယ်လိုရီလောက် လျှော့စားမယ်၊ လှုပ်ရှားမှုကို ကယ်လိုရီ ၂၅၀ လောက် လောင်ကျွမ်းသွားအောင် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ပိန်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
ပုံမှန် ထမင်းတစ်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစားရင် ၁၅၅ ကယ်လိုရီရပါတယ်။ ထမင်းတစ်ပန်းကန်ကိုဆိုရင် ကယ်လိုရီ ၂၆၀ ကနေ ၃၆၀ အထိ ရပါတယ်။ တစ်နာရီလမ်းလျှောက်တာနဲ့ ကယ်လိုရီ ၂၀၀ ပြည့်အောင်တောင် မလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အစားလျှော့စားသလို ကိုယ်အလေးချိန်မျှတအောင်လုပ်မှ မ၀မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်(အသားဓာတ်)ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ အသားဓာတ်တွေ ပြိုကွဲတဲ့အခါ အမိုင်နိုအက်စစ်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ပေးပါတယ်။ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြွက်သားကြီးထွားသန်မာဖို့ဖြစ်ဖြစ် အသားဓာတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမိုင်နိုအက်စစ်တွေက အမျိုးပေါင်း ၂၀ လောက်ရှိပြီး အဲဒါတွေ ပြိုကွဲပြီးတော့မှ သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆီရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ အဓိကက အသား၊ ငါး၊ ပဲ၊ တိုဟူး၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ အခွံမာအစေ့အဆန်၊ တချို့ကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ အသီးအရွက်တွေကနေလည်း ရပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ပရိုတင်းဘယ်လောက်စားရမလဲဆိုတော့ အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှာ တစ်ဆယ့်ငါးကျပ်သား စားရပါမယ်။
တစ်ရက်ဆိုတော့ နှစ်ကျပ်သားလောက်ပေါ့။ အသားတွေ မစားချင်ဘူးဆိုရင် ပဲအမျိုးမျိုး စားပေးနိုင်ပါတယ်။ ထမင်းဖြူနဲ့ ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းလေး စားတာမျိုးလည်း ရပါတယ်။ တချို့ဆို ကြွက်သားအရမ်းသေးပြီး မဖွံ့ဖြိုးတဲ့သူတွေဆိုရင် ပဲများများစားဖို့ ပြောပါတယ်။ ပရိုတင်းတစ်ဂရမ်က ကယ်လိုရီ ၄ ယူနစ်ရပါတယ်။ ပဲနဲ့ထမင်းနဲ့က ဘာလို့စားသင့်လဲဆိုတော့ တချို့အမိုင်နိုအက်စစ်တွေက ပဲမှာပါပြီး ထမင်းမှာမပါတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ စုံစုံလင်လင်ရရှိအောင် ပဲထမင်းစားတာက ကောင်းပါတယ်။
“ အခုနောက်ပိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေကို သွားစားတာများပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ အစားအသောက်တွေ မှာတဲ့အခါ အဆီမများဖို့၊ အငန်လျှော့ဖို့နဲ့ အချိုမှုန့်မထည့်ဖို့ ပြောရပါမယ်။ နောက်ပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲစားပါ။ ကြော်တဲ့အစာတွေအစား ပေါင်းထားတာ၊ ပြုတ်ထားတာတွေစားပါ။ ဗိုက်ပြည့်သွားရင် နှမြောလို့ဆိုပြီး မရမက မစားပါနဲ့။ ပါဆယ်ထုပ်သွားလိုက်ပါ” . . .
အဆီဓာတ်က တစ်ဂရမ်စားရင် ကယ်လိုရီ ကိုးယူနစ်ရပါတယ်။ အဆီစားတာက ကိုလက်စထရောတွေ တက်စေပြီး များရင်များသလို ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်။ အဆီမှာလည်း ပြည့်ဝဆီရှိတယ်၊ မပြည့်ဝဆီရှိတယ်၊ ပြောင်းလဲဆီရှိတယ်၊ ကိုလက်စထရောဆီဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီဆိုတာ စားအုန်းဆီတို့လိုမျိုး၊ အသားကနေရတဲ့ အဆီတွေ ဥပမာ- ၀က်ဆီ၊ အမဲဆီတို့လိုမျိုးကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ မပြည့်ဝဆီတွေကတော့ မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပုပ်စေ့ဆီ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥအနှစ်ကတော့ ကိုလက်စထရောပါပါတယ်။ နောက်ပြီး ကလီစာတွေဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်၊ ၀က်ဦးနှောက်လိုမျိုးဆို ကိုလက်စထရော အများကြီးပါပါတယ်။ ကြက်ဥတစ်လုံးမှာ ကယ်လိုရီ ၆၅ ယူနစ်ရှိပြီး ကိုလက်စထရော ၂၅၀ ပါပါတယ်။ အဆီဓာတ်ကို တကယ်တမ်းစားတဲ့အခါ တစ်ရက်အစားအစားအားလုံးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ စားသင့်ပါတယ်။ ပုံပြောင်းဆီကို ရှောင်ရပါမယ်။
ဆီကို အိုးထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါ မီးအပူနဲ့တွေ့ပြီး Hydrogenation (အငွေ့ပျံ) ဖြစ်ကာ ကျန်ခဲ့တဲ့ဆီတွေက ပုံပြောင်းဆီအဖြစ် ခေါ်ပါတယ်။ ဒီပုံပြောင်းဆီတွေ အစားများတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောလို့ခေါ်တဲ့ LDL တွေကို များစေကာ ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တစ်ခါချက်ပြီးသား ဆီတွေကို ပြန်မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကိုလက်စထရောကတော့ ဟင်းအနှစ်တွေမှာ ပါတာများပါတယ်။ ကြက်ဥ၊ အသည်း၊ ငါးဥ၊ ဒိန်ခဲ စတာတွေမှာလည်း ပါပါတယ်။ ပုစွန်အသားကတော့ စားလို့ရပါတယ်။ ပုစွန်ခေါင်းကတော့ ကိုလက်စထရောများတဲ့အတွက် လျှော့စားပါ။ နွားနို့ကိုကျတော့ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေ မသောက်ရဲဘူးလို့ လာပြောတာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ နွားနို့က ကိုလက်စထရော သိပ်မတက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မချဘူး၊ ကိုလက်စထရောတက်မှာ ကြောက်တယ်ဆိုရင် နွားနို့တည်ပြီးတဲ့အခါ အပေါ်မှာတက်လာတဲ့ မလိုင်တွေကိုဖယ်ပြီး သောက်နိုင်ပါတယ်။
အခွံမာအစေ့အဆန်တွေကိုလည်း စားပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောလို့ခေါ်တဲ့ HDL တွေရရှိစေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးစားဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့တိုင်းတော့ စားပေးသင့်ပါတယ်။ မြေပဲဆိုလည်း ဆယ်စေ့၊ သီဟိုစေ့ဆို ခြောက်စေ့လောက်ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ နေကြာစေ့၊ ဖရုံစေ့ဆိုလည်း လက်တစ်ဆုပ်ပေါ့။ နေ့တိုင်း အခွံမာအစေ့အဆန်တွေ စားဖို့ပြောတိုင်း အများကြီးစားလို့ မရပါဘူး။ ချင့်ချိန်ပြီး စားဖို့လိုပါတယ်။ သစ်သီးကို တစ်နေ့တစ်လုံးလောက်တော့ စားဖြစ်အောင်စားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥနီ၊ မုန်ညင်းထုတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ တိုဟူးစတာတွေကိုလည်း နေ့တိုင်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေကို သွားစားတာများပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ အစားအသောက်တွေ မှာတဲ့အခါ အဆီမများဖို့၊ အငန်လျှော့ဖို့နဲ့ အချိုမှုန့်မထည့်ဖို့ ပြောရပါမယ်။ နောက်ပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲစားပါ။ ကြော်တဲ့အစာတွေအစား ပေါင်းထားတာ၊ ပြုတ်ထားတာတွေစားပါ။ ဗိုက်ပြည့်သွားရင် နှမြောလို့ဆိုပြီး မရမကမစားပါနဲ့။ ပါဆယ်ထုပ်သွားလိုက်ပါ။ အိမ်ရှင်မတော်တော်များများက နှမြောစာတွေစားရင်း ၀လာကြတာများပါတယ်။ မလုပ်ပါနဲ့။ မစားနိုင်ရင် ထပ်မစားတာ ကောင်းပါတယ်။
အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်း အိပ်ချိန်တွေ နောက်ကျတာများလာတော့ မနက်ထတဲ့ အချိန်တွေလည်း ကမောက်ကမဖြစ်ပါတယ်။ ညတစ်နာရီလောက်မှအိပ်တော့ မနက်ကို ကိုးနာရီလောက်မှ ထဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မနက်စာက နေ့လယ် ၁၁ နာရီလောက်မှ စားဖြစ်ပြီး နေ့လယ်စာကျတော့ သုံးနာရီလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညစာကျတော့ ညရှစ်နာရီ၊ ကိုးနာရီလောက်မှ စားဖြစ်ပြီး အချိန်တွေလည်း မှားကုန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဆီးချိုရောဂါတွေ၊ ကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ချိန်ကို ည ၁၀ နာရီ နောက်ဆုံး၊ အလုပ်များရင် ၁၁ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး အိပ်ပေးပါ။ မနက်ဆို ခြောက်နာရီ၊ ခုနှစ်နာရီလောက်ထတာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လက်ဆေးပါ။ ဘယ်သွားသွား ဖိနပ်စီးသွားပါ။ ဆီးသွားပြီးတိုင်း ရေဆေးပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ ယောဂကစားတာ၊ ခရီးသွားတာတွေ ပြုလုပ်ပါ။ အလုပ်တွေအများကြီးကို လက်မခံပါနဲ့။ ကိုယ်ကျန်းမာသလို စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်း အလေးထားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Related Items:fresh foods, healthy benefits, healthy eating